Vavaka ho an'i Masindahy Jude Thaddeus ho an'ny tranga tena sarotra sy mamoy fo. ?
Vavaka ho an'i Masindahy Jude Thaddeus ho an'ny tranga tena sarotra sy mamoy fo Amin'ireo fangatahana azon'ny olona iray dia misy tranga sarotra kokoa noho ny hafa. Ho an'ireo dia misy ilay vavaka mahery.
Eto dia tsy afaka mangataka zavatra tsotra na tsy misy dikany ianao, izany hoe: ity vavaka ity dia manokana manontany ireo zavatra tsy ho azo atao toy ny fanasitranana mahagaga, ohatra.
Ny tranga ara-pahasalamana no tena fahita indrindra, na izany aza dia afaka mangataka zavatra hafa ianao.
Amin'ny toe-javatra misy olona tsy ampy taona, zaza na lehibe, dia angataho i San Judas Tadeo hampiseho azy ireo ny lalana hody.
Ny tena zava-dehibe dia ny finoana izay nanaovana azy.
Ny famoizam-po ny hahita fahagagana dia ara-dalàna, matetika ny toe-javatra izay toa tsy mahafaty, fa amin'ireto tranga ireto dia ny vavaka ihany no hany loharanom-pihavanana sy fahatokisantsika.
1 Vavaka ho an'i Saint Judas Tadeo amin'ny raharaha sarotra sy kivy izaitsizy?
2 Vavaka ho an'i Md Jude Thaddeus amin'ny raharaha sarotra sy kivy
3 Mahery ve ny vavaka?
4 Rahoviana aho no tokony hivavaka amin'ny alàlan'i Md Jude Thaddeus?
Vavaka ho an'i Saint Judas Tadeo amin'ny raharaha sarotra sy kivy izaitsizy?
Fantatra ny hoe olo-masina manampy antsika amin'ny tranga toa tsy misy vahaolana. Voalaza ao amin'ny evanjelin'ny Baiboly ho iray amin'ny roa ambin'ny folo mpianatr'i Jesosy izy.
Ny maha-apôstôly roa ambin'ny folo azy dia akaikin'ny Tompo izy tamin'ny fotoana naha-teto an-tany azy tamin'ny endriny.
Matetika izy no misafotofoto amin'i Jodasy Iskariota, ilay ilay nanome an'i Jesosy ho an'ny Fariseo.
Jodasy Tadeo tsy manana fampahalalana mivaingana be izay milaza amintsika ny fiaviany, fa ny fantatra dia ny heriny manome fahagagana tsy hay.
Ilay atao hoe olo-masina be mpitia indrindra izy ankehitriny, ka zava-dehibe indrindra ny fahalalana kely kokoa ny tantarany.
Ny heriny mahagaga dia ny maha-mpanelanelana antsika eo amin'i Jesosy, amin'ny fomba toa izao dia azo inoana fa ny maha-fangatahana dia manjary zava-dehibe kokoa eo alohan'ny seza fiandrianan'ny selestialy ary noho izany antony izany dia voavaly haingana izy ireo na inona na inona sarotra na sarotra ny fahagagana izay angatahina. ao amin'ny vavaka.
Oh, St. John Jude! Mpanompon'i Jesosy sy mahatoky an'i Jesosy. Ny anaran'ilay mpamadika izay nanome ny Tomponao malalanao ho eo an-tànan'ny fahavalony no antony nahatonga ny maro hanadino anao. Saingy manome voninahitra sy manainga anao amin'ny ankapobeny ny Fiangonana amin'ny maha-mpanohana ny raharaha sarotra sy kivy.
Mivavaha ho ahy fa tena fadiranovana loatra aho ary ampiasaiko, mangataka aminao aho momba an'io tombontsoa manokana omena anao io. Izay hanampiana hita maso sy haingana rehefa saika ny fanantenana rehetra dia efa very.
Tongava manampy ahy amin'ity fanampiana lehibe ity.
Mba hahazoako ny fampiononana sy ny fanampian'ny lanitra amin'ny filako rehetra, ny fijaliana ary ny fijaliana indrindra (ataovy eto ny vavaka manokana ataonareo). Ary mba hitahiany an'Andriamanitra miaraka aminao sy amin'ny olom-boafidy rehetra mandrakizay doria.
Mampanantena anao aho, ry Saint Jude, mba hahatsiarovanao hatrany an'io fankasitrahana lehibe io ary tsy hitsahatra ny hanome voninahitra anao mihitsy aho fa mpiaro manokana sy mahery ahy ary hanao izay rehetra azoko atao hampitomboana ny fitiavanao azy.
Ny areti-mifindra toy ny homamiadana, lozam-pifamoivoizana, olona tsy hita, an-keriny, halatra ary ny fangatahana rehetra izay heverina fa sarotra dia ireo tsy maintsy miatrehana an'io olo-masina io.
Tsy maintsy manontany manokana ianao hoe inona no tadiavinao, satria izany dia tokony ho fantatrao tsara ny raharaha, tsy afaka mangataka fanasitranana olona isika, tsara kokoa ny mivavaka manokana, mampiasa ny anaran'ny olona sy ny anaran'ny aretina, ohatra .
Manokana manam-pahaizana momba ny antony very, amin'ireo toe-javatra izay very ny finoana, tsy misy fanantenana intsony.
Ireo fotoana ireo no misy ny herin'ity mpampiasa ity. Manampahaizana manokana amin'ny fanavotana ny fahafaha-mino olona Olomasina iray izay manampy antsika hitazona sy hampahatanjaka ny finoana.
Mahery ve ny vavaka?
Ny mahatonga ny vavaka ho an'i Md Jude Thaddeus ho an'ny raharaha sarotra sy mamoy fo dia mahery tokoa ny finoana misy azy.
Ny tenin'Andrimanitra dia mampianatra antsika fa raha mangataka ny Ray isika hino dia hanome antsika ny fahagagana izy.
Noho izany dia azontsika an-tsaina fa ny takian'ny fehezanteny iray ihany no ahazoana valiny. Ny mangataka tsy misy finoana dia afaka miankina amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny fanampiana, dia ny mivavaka foana.
Izahay dia tsy afaka manontany olona iray izay tsy inoantsika hanome anay. Ny fangatahana rehetra dia tsy maintsy mino avy amin'ny halalin'ny fo.
Finoana marina Andriamanitra, izay namorona ny zavatra rehetra, dia mbola mahery manampy antsika amin'ny zavatra rehetra ilaintsika ary manana ny olomasiny hanampy azy hahatratra izany, koa aza misalasala mivavaka ianao isaky ny mila izany ianao.
Rahoviana aho no tokony hivavaka amin'ny alàlan'i Md Jude Thaddeus?
Tianao ho fantatra ve hoe rahoviana ianao no tokony hivavaka an'io vavaka mahery io?
Azonao atao ny mamonjy ny vavaka amin'i Md Jude Thaddeus momba ny raharaha sarotra sy kivy indrindra isaky ny mila izany ianao.
Io olo-mahery io dia maheno ny fangatahanao rehetra, satria ampy ny mivavaka amim-pinoana sy amin'ny finoana be dia be ao am-pony.
Afaka mivavaka sy isan'andro ianao alohan'ny hatory na isan'andro rehefa mifoha ianao.
Raha manam-potoana ianao dia manoro hevitra izahay fa mandrehitra labozia fotsy omena anao amin'i San Judas Tadeo.